China 1000V 1500V OEM စိတ်ကြိုက် MC4 Solar Extension Cable DC နှင့် DC ရေစိုခံအမျိုးသားအမျိုးသမီးစက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | ထင်း
1000V 1500V OEM စိတ်ကြိုက် MC4 Solar Extension Cable အား DC Waterproof Connector အမျိုးသားအမျိုးသမီးပါ ၀ င်သည်
1000V 1500V OEM စိတ်ကြိုက် MC4 နေရောင်ခြည်တိုးချဲ့ခြင်းကေဘယ်လ်နှင့် DC ရေစိုခံ Connector အမျိုးသားအမျိုးသမီးဆိုလာပြားနှင့်အင်ဗာတာ (သို့) controller box အကြားဆိုလာ PV စနစ်တွင်အသုံးပြုသည်။ ၄ င်းတို့သည်ခရမ်းလွန်ခုခံနိုင်မှုနှင့် IP68 ရေစိုခံနိုင်မှုဖြစ်ပြီးအပြင်ဘက်တွင် ၂၅ နှစ်လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ MC4 Extension Cable သည်သင်လိုအပ်သလောက်ကွဲပြားသောအရှည်နှင့်အရွယ်အစားကွဲပြားသော OEM ဖြစ်နိုင်သည်။
ကြိုးအရွယ်အစား: 2.5mm2, 4mm2, 6mm2
ဆက်သွယ်မှု MC4 Connector
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား: DC က 1000V, 1500V
အသွင်အပြင်: IP67 ရေစိုခံ၊ ခရမ်းလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်
OEM ကြိုးအရှည်: ဟုတ်တယ်
အလုပ်လုပ်ဘဝ: ၂၅ နှစ်
1000V 1500V OEM စိတ်ကြိုက် MC4 နေရောင်ခြည်တိုးချဲ့ခြင်းကေဘယ်လ်နှင့် DC ရေစိုခံ Connector အမျိုးသားအမျိုးသမီးသည်ဆိုလာပြားကိုအားသွင်း controller နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဝါယာကြိုးနှစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အားသွင်းကြိုးတွင်အားသွင်းကြိုးအလွယ်တကူချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက်အဆုံးတွင် MC4 connectors များနှင့်အခြားအဆုံးရှိကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်သို့တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ရန်အတွက် Adapter Kit တွင်ပါဝင်သည်။ ဤဝါယာကြိုးကိရိယာသည်ဇယားကွက်ပြင်ပနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးတပ်ဆင်မှုများ၊ ခေါင်မိုးသို့မဟုတ်မြေပြင်အဆင့်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီးအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည်။ ဝါယာကြိုးသည်ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ပြီးအလွန်အပူနှင့်အအေးဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဤဝါယာကြိုးကိရိယာသည် Off-Grid ပစ္စည်းများအတွက် ၁၀၀W မှ ၄၀၀W အထိစံသည်။
MC4 တိုးချဲ့မှုသည်ကျယ်ပြန့်သောအရှည်များနှင့်ရွေးချယ်နိုင်သောမတူညီသော gauge အရွယ်အစားနှစ်ခုပါဝင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားများသည်ဖောက်သည်တစ် ဦး ၏နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြားနှင့်အားသွင်းစက်ကြားရှိထူးခြားသောလိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
ဆိုလာ PV ဝါယာကြိုး၏အားသာချက်များ
MC4 Solar Waterproof Connector ၏အားသာချက်
MC4 Extension Wire (အမည်းရောင်၊ 1x4mm2၊ L = 2m)၊ OEM လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်)
၁။ MC4 Connector အထီး - အမျိုးသမီးတိုးချဲ့မှုသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်
Tinned Bare Cable သို့ MC4 Connector ယောက်ျား / မိန်းမဖြစ်သည်
3. Anderson4 Connector 50A သို့ MC4 နေရောင်ခြည်သုံးကွန်နက်ရှင်
4. SA4 Connector နှင့် MC4 နေရောင်ခြည်ဆက်သွယ်မှု
LP20 ပါဝါ connector ကိုမှ 5. MC4 Connector
ရှေ့သို့6မှ 1 MC4 Splitter ကိုအပြိုင်အတွက်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Panel များချိတ်ဆက်
နောက်တစ်ခု: 2to1 MC4 Y Connector နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဒြပ်စင်များကိုအပြိုင်သို့မဟုတ်စီးရီးဖြင့်ချိတ်ဆက်နေသည်